२६ औं ओभरमा नेपाललाई चौथो सफलता – पुरा पढ्नुहोस्……
२६ औं ओभरमा नेपाललाई चौथो सफलता
काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन–२ अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा अहिले नेपालले क्यानडासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । नामिबियामा भइरहेको जित्नैपर्ने खेलमा नेपालले टस जितेर पहिले फिल्डिङ रोजेपछि क्यानडा ब्याटिङमा छ।२६ ओभरको चौथो बलमा नेपाललाई चौथो सफलता प्राप्त भएको छ । क्यानडाका एमएस धलिवाललाई २६ बलमा चार रनमै बसन्त रेग्मीले आउट गरेका हुन् । यो सँगै क्यानडाको चार विकेट गरेको छ ।
यसअघि १७ औं ओभरको अन्तिम बलमा सन्दीप लामिछानेले क्यानडाका डिएन पथिरानालाई आउट गरेर नेपालका लागि तेस्रो विकेट लिएका थिए । पथिरानाले ११ बलमा दुई रनमा सन्दीपले आउट गरेका हन् ।
यसअघि नै ब्याटिङ लाइनअप बलियो रहेको क्यानडालाई १३ ओभरका दोस्रो बल खेल्दा दुई विकेट गुमाएको थियो । नेपालका लागि दोस्रो विकेट सन्दीप लामिछानेले लिएका थिए । सन्दीप लामिछानेको बलमा ज्ञानेन्द्र मल्लले क्याचआउट गरेका हुन् । दोस्रो विकेटका रुपमा क्यानडाका कप्तान नितिशकुमार आउट भएका छन् ।
यसअघि १० ओभरमा नेपालले पहिलो सफलता स्वरुप पहिलो विकेट लिएको थियो । बसन्त रेग्मीको बलमा रोहित पौडेलले आर गुनासेकरालाई क्याचआउट गरेर पहिलो विकेट लिएका थिए । गुनासेकरा २४ बलमा ९ रनमै आउट भएका थिए ।२६ औं ओभरको समाप्तिमा क्यानडाले चार विकेटको क्षतिमा ९३ रन बनाएको छ ।
Prevसिधाकुरा जनतासंग टीम र पत्रकार रवि लामिछानेको सम्मानमा बन्यो गीत (भिडियो )
Nextसुनको मूल्य बढ्यो की घट्यो ? यस्तो छ आजको मुल्य
झापामा भेटीए यस्ता अचम्मका बालक.. हेर्नुहोस जस्तो प्रतिभाले दुनियाँ चकित, सहयोग स्वरुप सक्दो सेयर गर्नुहोला, भिडियो सहित
आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल भाद्र २६ गते मंगलबार, सेप्टेम्बर ११ तारीख – दर खाने दिवस
भाग्यमानी नेपालका यी युवा :: साउदी अरबबाट घरमा पैसा पठाउँदा यसरी पाए १० लाख ! हेर्नुहोस्